About Us-Ihhotela Lebukhatikhati isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu MANUFACTURER
Armati-- China isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu Manufacturer for Ihhotela Lebukhatikhati Project.
Armati okugeza hardware, umenzi eziholela ephezulu ebangeni brand sanitary e Asia-Pacific Isifunda. Sine ukukhiqizwa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu hardware yokugezela isitshalo Southern China Jiangmen idolobha (Heshan) .Futhi acquird yokukhiqiza abalingani German. Early kusukela 1966 thina ezihilela ku yokugezela design umkhakha, kusukela maphakathi no 1990s, siqala isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu kanye ukukhiqizwa kufaneleka okugeza umkhakha ngokulandelana ekhatsi Foshan futhi Heshan City.Our imikhakha komkhiqizo zihlanganisa okunethezeka ekupheleni okusezingeni isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, ihhotela yokugezela hardware izesekeli, ihhotela uhlelo eshaweni, toilet ngamanzi valve, okuzenzakalelayo inzwa isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, futhi ephelele nge egcizelele kakhulu zamatshe yokufakelwa yokugezela nokulwela bathtube.
Amati yokugezela kakade OEM yokukhiqiza naye eminingi German kanye Italian brand owaziwa kahle, kuhlanganise Dornbracht odumile kakhulu, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti nokunye, ngezinye izikhathi senza ukukhiqiza model ephelele, ngalesinye sikhatsi siyaye ukuphakela izingxenye kanye components.With izinga okusezingeni imikhiqizo futhi ephakeme ngokuqhathanisa intengo resonable, siye bakhangwa ngempumelelo ezinkulu aphambili Hotel Management Group e-Asia Pacific Isifunda kanye umlingane yethu yesikhathi eside, ezifana Kempinski, Sheraton, The Venetian futhi abaningi abengeziwe. (Hlola lokhu okulandelayo ngoba hotel Armati project Indaba eyimpumelelo)
In Chinese emakethe yasekhaya, thina futhi sigxile Ihhotela Lebukhatikhati project market.All of distributor yethu wesifundazwe futhi distributor olusemthethweni GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT .Thina Futhi umphakeli Superstore kunazo zonke emhlabeni like Walmart,The Home Depot, Lowe sika, singathanda ukuba basebenzise ingxenye yethu ezimakethe zamazwe omhlaba khezekheze ehhotela emakethe ingxenye. (Hlola lokhu okulandelayo ngoba Armati hotel project Sendlela ezifuywayo kanye aphesheya)
Njengomuntu hardware nomakhi nge eminyakeni engaphezu kuka 20 nakho, siye zanqwabelana isibalo esikhulu isikhunta for ezahlukene isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu isitayela kanye shape.Partner nge umklami Italian esinakho 38 uchungechunge isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu futhi 16 uchungechunge okugeza izesekeli range.But yethu ejwayelekile esinawo 30% ibhizinisi lwasekhaya inkambiso umkhiqizo, futhi> 50% ibhizinisi emazweni omhlaba njengoba OEM ukukhiqiza egcizelele. (Hlola lokhu okulandelayo ngoba Armati isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu yokugezela izesekeli yomkhiqizo ikhathalogi)
Siphakamisa ukukhiqiza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esiyingqayizivele ngoba zonke umklami onesifo ngamaphupho nezifiso! Sibeke MOQ low OEM zokukhiqiza, singakwazi ngisho iveza egcizelele isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu for yakho project ngokukhethekile. Imagine ukuthi lokukhiqiza efanayo izinga ejwayelekile HANSGROHE, GROHE ungenza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu accroding imibono yakho, imidwebo, noma izithombe, futhi phambili isikhathi izinsuku 10 kuphela 4 amasonto. (isibonelo zethu zamuva ezivela design umqondo mass production sekugcineni izinsuku 45 kuphela) . Lokhu kuyoba esiyingqayizivele, siphakamise futhi best othwala umklami sika talent, ukwakheka kanye ibenze isandla umklami umkhiqizo wakho. Just like edumile kakhulu Starck Philippe. (Hlola lapha ukuze uthole Armati Custom isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu ehhotela icala isifundo)
1) Ngithanda ukwazi umlando ka Amati, Ingabe wena inkampani Chinese noma inkampani capital owned angaphandle, futhi siyini ubuhlobo phakathi kwenkampani German?
Thina ithimba multi-kazwelonke, base ukukhiqizwa bethu equit nomkhiqizo Taiwanese kanye nokuphathwa knowledge.We aluthola eJalimane isitshalo anokuhlangenwe nakho e ware.We sanitary esiqashiwe umkhiqizo Italian umklami ukudala model.We yethu kungamathonya kokubili Chinese kanye German.In the Chinese emakethe yasekhaya futhi ezimakethe zomhlaba jikelele, sisebenzisa Amati njengoba brand imikhiqizo sanitary.
2) Ngingathanda ukwazi okwengeziwe base yakho zokukhiqiza, ezifana ezindawo indawo, indawo, abasebenzi kanye QC, kanye nosayizi wakho we lebhizinisi, njll?
We ngumnikazi naphakathi production plant nge 10000 square imitha 150 worker.We focus on iningi ephezulu emihlanu Stars Hotel project emakethe, ngokuprakthiza okukhulu kule ikhasimende market.Our zifaka Hotel and Interior umklami, usonkontileka, umthuthukisi (ikakhulu kuphele umsebenzisi), retail kanye nokusabalalisa akuyona priority.We wethu liqalise ukukhiqizwa jit style.In 2015, bethu Chinese emakethe inzuzo aiziqubu USD 12 million, ngoba lonke ibhizinisi ngokuqinile inzuzo ukuze 35 million USD.
3) Indlela oyifisayo isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu? Nginayo project eyodwa kuphela esandleni, ngingacela ukuze wenze isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu?
Sine 50% imikhiqizo yokukhishwa iklayenti Yenza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, hlola lapha ukuze ubone imininingwane.
4) isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu zakho high-ekupheleni, emihlanu-star hotel grade, ngingathanda ukwazi it ngokuningiliziwe, Ungakwazi yini ukwethula it?
Sisebenzisa nqampuna umhlabeleli zethusi ukwenza isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu futhi Plating kanye nokwelashwa kwamanzi ubuchwepheshe obufanayo standard German, Sine siqu yokungenisa wesiteshi for izinga ingxenye like Kereox igobolondo Ceramic futhi NEOPERL aerator. (hlola lapha ngoba Armati isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu umkhiqizo imininingwane)
5) Unganikela hotel yokugezela suite, iphakheji jikelele?
Ngokuqinisekile, thina ukukhiqiza yokugezela hardware zethusi like isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu, yokugezela izesekeli, eshaweni chungechunge, futhi ubhavu imfucuza, siphinde sibe yokufakelwa itshe nokulwela ubhavu ukubambisana. We ukwazi Kuwo wonke amahhotela yokugezela uhlukile, landela ezithile zemvelo, izilinganiso yehhotela ukuqamba iNdondo yokugezela ngamunye fitting.Sometimes, ukuthenga brand owaziwa yokugezela kufaneleka, may asihambisani lakho lendawo nezindlu zangasese sebhithi. Kungcono ukuthola okuhlangenwe nakho, ukhwaliti isiqinisekiso umkhiqizi egcizelele ukubambisana, ogcina umphumela wobuciko kanye nezomnotho, Uma everybody nje usebenzisa brand onobuhle ekhona, asikho isidingo sokuba umklami.
6) Uphi base yakho ukukhiqizwa, engingayenza vakashela isitshalo sakho e China?
sizindza setfu lesikhulu ukukhiqizwa eningizimu yeChina Jiangmen idolobha (Heshan), Guangdong province.We wamisa ihhovisi e Shenzhen imakethe yasekhaya, sinazo Showroom edolobheni downtown.Welcome ukuvakashela plant kuzoxoxwa yakho mfuneko project. Ngezinye izikhathi 1 noma 2 izinsuku abhekane neqiniso umhlangano ongaxazulula inkinga lokungetulu kwekumane zokuxhumana ngenyanga imeyili eziningana.
(Hlola lapha ukuze uthole Armati production plant futhi umkhiqizo imininingwane)